Antoine Griezmann oo daaha ka rogay sheekadii dhex martay isaga iyo Lionel Messi markii ugu horreysay ee ay wada kulmeen – Gool FM
(Barcelona) 24 Nof 2020. Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Antonie Griezmann ayaa qirtay masuuliyadda dib u dhaca u soo dhaqaaqistiisa kooxda Camp Nou ka dhisan xagaagii 2018, iyo inay taasi qalbi jab ku ridday Lionel Messi.
Laacibka reer France ayaa iska diiday Barca hal xilli ciyaareed ka hor inta uusan ku soo biirin, waxaana markaas uu go’aansaday inuu iska sii joogo kooxdiisii hore ee Atletico Madrid.
Balse Messi ayaa si diirran u soo dhoweeyay Griezmann markii uu 2019 ku soo biiray Barcelona, waxaana xiddigii hore ee Real Sociedad uu sheegay inay sheeko dheer dhex martay labadooda.
“Markii aan ku soo biiray kooxdan, waxaan ka dalbaday cafis maadaama aan dib u dhigay inaan midowno” ayuu xiddigan u sheegay Jorge Valdano barnaamijkiisii ugu dambeeyay ee Universo Valdano.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay markii ugu horreysay ee uu la hadlay kabtanka Barca, waxaana uu yiri: “Waan la hadlay Messi markii aan imid, wuxuuna ii sheegay inuu niyad jabay markii aan iska diiday ku soo biirista Blaugrana dalabkii koowaad kaddib, maadaama uu isagu si cad u sheegay inuu doonayay imaanshaheyga”.
Griezmann ayaa intaas ku daray in Messi uu ka heysto ballan-qaad ah inuu garab joogayo, taasna uu maalin walba xusuusan yahay.
Docda kale, laacibkii hore ee Atletico de Madrid ayaa gaashaanka u daruuray eedeymihii ay adeerkiis Emmanuel Lopes iyo wakiilkiisii hore ee Eric Olhats u soo jeediyeen Messi oo ah inuu laacibka reer Argentina sabab u yahay inuu 29-sano jirkan ka soo bidhaami waayo Camp Nou.
Weeraryahanka reer France ayaa sheegay in isaga iyo Eric Olhats aysan lahayn wax xiriir ah tan iyo markii uu guursaday, maadaama uu wakiilkiisii hore diiday dalabkii ahaa inuu ka soo qayb galo arooska Griezmann.
Kooxda Manchester City oo aan wax dalab ah ka gudbin doonin Lionel Messi sanadka soo socda... (Maxaa isbedelay?)